XOG: Wasiir saameyn ku leh xukuumadda oo xilkiisa ku weynaya Go’aanka Kheyre -News and information about Somalia
Home Warkii XOG: Wasiir saameyn ku leh xukuumadda oo xilkiisa ku weynaya Go’aanka Kheyre
XOG: Wasiir saameyn ku leh xukuumadda oo xilkiisa ku weynaya Go’aanka Kheyre
Waxaa soo baxaya warara sheegaya in Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre qorsheynayo inuu xilka ka qaado Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed cabdi Xayir Maareeye.
Xog aan helnay ayaa sheegeysa in sababta xilka looga qaadayo Wasiir Maareeye ay tahay in loo wareejiyo Wasaarad kale oo loo arkay inuu muhiim u yahay shaqadeeda.
Lama oga waxay tahay wasaaradda kale ee Wasiirka Warfaafinta loo wareejiyo,balse wuxuu yahay hadalkan midka ugu badan ee maanta sida aadka ah looga hadal hayo Wasaaradda warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya,Maxamed Cabdi Maareeye ayaa horay looga soo wareejiyay Wasaaradda ganacsiga iyo Warshadaha oo la rumeysan yahay inuu wax badan ka soo qabtay.
Wasiir Maareeye ayaa si aad ah u difaaca Xukuumadda Kheyre,wuxuuna isbedel wanaagsan ku sameeyay wasaaradda uu haatan madaxda u yahay ee warfaafinta,sida dad badan ay qabaan.
Previous articleDEG DEG: Shir Ka Dhan Ah Faragelinta Ciidanka Itoobiya Ee Galmudug Oo Ka Socda Muqdisho
Next articleXOG: Fadeexad culus oo soo wajahday Wasiir Khadiijo & mashruucii dhalinyarada oo la leexsaday
DEG DEG: Hoggaanka Ahlusunna Oo Shir Uga Socda Magaalada Dhuusamareeb
DAAWO: Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Qeyb Galay Furitaanka Madasha Ruushka Iyo...